अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? नयाँ स्किल्ड अकुपेसन लिष्ट सार्वजनिक,थपिए पेशाहरु - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
अष्ट्रेलिया जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? नयाँ स्किल्ड अकुपेसन लिष्ट सार्वजनिक,थपिए पेशाहरु
प्रकाशित मिति: ३० फाल्गुन २०७५, बिहीबार March 14, 2019
अष्ट्रेलिया । नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि अष्ट्रेलिया प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ । अध्ययनको लागि जाने बाहाना बनाउदै रोजगारीको लागि जानेको संख्या धेरै नै रहँदै आएको छ । पछिल्लो समयमा बेलायतका शिक्षण संस्थामा समस्या देखिएको र अमेरिकामा पढ्न महँगो खर्च गर्नुपर्ने भएकाले विद्यार्थीहरूको ध्यान अष्ट्रेलियातर्फ मोडिएको छ ।
अर्कोतर्फ अष्ट्रेलियामा तुलनात्मक रूपमा सस्तोमा आफूले चाहेको विषय अध्ययन गर्न पाउने र अन्य सुविधाहरूसमेत प्रशस्त भएकाले धेरै विद्यार्थी अष्ट्रेलिया जान चाहेको शैक्षिक परामर्श कम्पनीका सञ्चालकहरू बताउँछन् ।
नयाँ स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट सार्वजनिक
अष्ट्रेलियाको दक्ष पेशाको नयाँ सूचीमा पेशाहरु थपिएका छन् । अष्ट्रेलियाको पीआर पाउनको निम्ति दक्ष पेशाको सूचीमा नोमिनेट हुनुपर्छ । अष्ट्रेलिया अहिले त्यही स्किल्ड अकुपेसन लिस्ट अर्थात दक्ष पेशाको सूचीलाई बढाएको हो ।
सार्वजनिक भएको नयाँ सूची स्किल्ड इन्डीपेनडेन्ट भिसा ( सबक्लास १८९ ) मा २ सय १२ पेशा रहेका छन् । स्किल्ड नोमिनेटेड भिसा ( सबक्लास १९० ) मा ४ सय २७ पेशाहरु रहेका छन् । त्यस्तै इम्प्लोयर नोमिनेसन स्किम भिसा ( सबक्लास १८६ ) मा २ सय १६ भिसा रहेका छन् भने टेम्पोररी स्किल सर्टेज भिसा ( सबक्लास ४८२ ) मा ५ सय ८ पेशा रहेका छन् ।
नयाँ पेशाको सूची मार्च ११, २०१९ देखि नै लागु हुने बताइएको छ । नयाँ सूचीमा कोरियोग्राफर, फुटबलर, मल्टिमिडिया स्पेसलिस्ट आदि पेशाहरु थपिएका छन् । पूरा सूची हेर्नको लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।
कसरी लिईन्छ भर्ना ? कुन कुन महिनामा खुल्छ भर्ना
अष्ट्रेलियामा सामान्यतः फेब्रुअरी र जुलाई गरि दुई इन्टेकमा भर्ना लिने गरिन्छ । तर केही विश्वविद्यालयले सेप्टेम्वर र नोभेम्वरको महिनामा पनि भर्ना लिने गर्दछन् । यसरी थप गरिएको सेप्टेम्वर र नोभेम्वरको भर्ना समयमा भने सबै विषयको भर्ना नलिन सक्छ ।
त्यसैगरी भोकेसनल शिक्षाका लागि खुलेका प्राइभेट कलेजले हरेक दुई महिनामा नयाँ भर्ना लिने गरेका छन् । यसरी भर्ना हुने विभिन्न महिना हुँदा पनि विद्यार्थीले प्रक्रिया शुरु गर्दा कम्तीमा ६ महिना अगाडिदेखि शुरु गर्नुपर्छ । पासपोर्ट बनाउने,आइएलटिएसको तयारी कक्षा पहिलेदेखि नै शुरु गदा उपयुक्त हुन्छ ।
पछिल्लो समय अष्ट्रेलियामा आवेदन दिनेको संख्या दिनदिनै बढ्दै गएको छ । यसरी विद्यार्थीको आवेदन संख्या बढ्नुको कारण धेरै छन् । यसको प्रमुख कारण अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत विद्यार्थीमध्ये बहुसंख्यक विद्यार्थीहरुको सकरात्मक प्रतिक्रिया हो ।
लियामा शान्त र समृद्ध,उचित शैक्षिक वातावरण,गुणस्तरीय शिक्षा,वैज्ञानिक शिक्षण प्रणाली,पढाइसँगसँगै काम गर्न पाउने नियम,पीआर पाउने प्रवल सम्भावना,विवाहित भएमा दम्पत्ति नै जान पाउने सुविधा आदि कारणले अष्ट्रेलियामा पढ्न जानेको संख्या बढेको हो । नेपाली विद्यार्थीहरुको पनि अष्ट्रेलिया प्रमुख गन्तव्य बनिरहेको छ ।
व्यावसायिक विषयको रोजाइ
अधिकांश विद्यार्थीहरू सूचनाप्रविधि, नर्सिङ, इञ्जिनीयरिङ, स्वास्थ्य विज्ञान, एमबीए, हस्पिटालिटी म्यानेजमेण्टजस्ता विषय अध्ययनका लागि अष्ट्रेलिया जाने गरेका छन् । विद्यार्थीहरूले सैद्धान्तिकभन्दा प्राविधिक विषयलाई बढी ध्यान दिने गरेका छन् ।
डिपेन्डेन्ट भिसामा कसरी जाने अष्ट्रेलिया ?
अस्ट्रेलियामा जाने नेपाली विद्यार्थीमध्ये ३० प्रतिशत ‘डिपेन्डेन्ट भिसा’ मा रहेको अनुमान छ । ‘डेपेन्डेन्ट भिसा’ अर्थात विद्यार्थी सपरिवार बसेका छन् । अस्ट्रेलियाको कानुनी परिभाषाअनुसार परिवारभित्र पति, पत्नी र छोराछोरी पर्छन् । अध्ययनमा गएका विवाहित नेपाली पुरुष या महिलाले पाउने अतिरिक्त सुविधा हो- ‘डेपेन्डेन्ट भिसा’ । एक वर्षभन्दा बढी समयका निम्ति ब्याचलर डिग्री, ब्याचलर अनर्स, मास्टर्स, मास्टर्स रिसर्च वा पीएचडी गर्न जाने विद्यार्थीले यो सुविधा पाउने गरेका छन् ।
परिवारसँगै रहेर शिक्षा र अन्य अवसर हात पार्ने मेसो यो प्रक्रियाले दिएको छ । विवाहित पत्नी होस् या पति जो पहिले अस्ट्रेलिया गएको छ या सँगै जान सक्छन् । अथवा पछि विवाह गरेर जान पनि सक्छन् । ‘परिवारका सदस्य मात्रले विद्यार्थी सँगै वा पछि छुट्टै आवेदन दिन सक्छन्, । ‘यदि कुनै विद्यार्थी एक वर्षभन्दा लामो समयको कोर्स पढ्न जाँदै छ भने आफ्नो परिवारबाट टाढा रहन नपरोस् भनेर दिइएको सहुलियत हो ।’
भिसा प्रक्रियाको सुरुमै विभिन्न प्रमाणित कागजागतहरू पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा विवाह दर्ता प्रमाणपत्र, जन्मदर्ता, नाता प्रमाणित, विवाहको फोटो, घरजग्गाको आधार, संयुक्त बैंक खाता, विभिन्न चाडबाड सँगै मनाएको भिडियो, सीडी, भीसीडी, फोटो आदि पर्छन् । त्यसैगरी पति र पत्नीबीच हुने सम्बन्धजन्य फोन, इमेल, स्काइप, कुराकानी, विवाह वाषिर्कोत्सवको मितिजस्ता सम्बन्ध कायम रहेको प्रमाणहरू आवश्यक रहन्छ ।
सबै प्रमाण पुर्‍याएपछि डिपेन्डेन्ट व्यक्तिको भिसा प्रक्रिया सुरु हुन्छ । आफ्नो बालबच्चा रहेमा उसको समेत सबै कागजात रुजु हुनुपर्छ । भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाणपत्र सबै जुटाउनुपर्ने छ ।
विद्यार्थीले मास्टर्स या त्योभन्दा माथिको कोर्स पढ्दै गरेको भएमा डिपेन्डेन्ट भिसामा अस्ट्रेलिया गएका परिवारका सदस्यले पूर्णकालीन काम गर्न पाउँछन् । मास्टर्सभन्दा तल्लो तहको अध्ययन गरेको भएमा परिवारका सदस्यले सातामा २० घन्टाको दरले काम गर्न पाउँछन् ।
यसैगरी विद्यार्थीले सातामा २० घन्टा काम गर्न पाउँछन् । छुट्टीको समयमा पूरै काम गर्न पाउँछन् । श्रम कानुनअनुसार प्रत्येक कामदारले अस्ट्रेलियन १६ डलर पारिश्रमिक पाउँछन् । कामको प्रकृतिअनुसार त्योभन्दा बढी पनि आर्जन गर्न सक्छन् ।
अध्ययन भिसा नेपालबाट अस्ट्रेलियाको कलेज र युनिभर्सिटीमा भर्ना हुने प्रक्रिया हो । प्लस टु, स्नातक या मास्टर्स सकेको छ र थप अध्ययन गर्न जान चाहन्छ । भाषाको परीक्षा चार किसिमको मध्ये कुनै एक दिनुपर्छ । IELTS (इन्टरनेसनल इंग्लिस ल्याङ्वेज टेस्टिङ सिस्टम) पढेकै हुनुपर्छ ।
पढेको तहको सर्टिफिकेट, भाषाको रिजल्ट, अनुभव भएमा त्यसको सर्टिफिकेटसहित कलेज युनिभर्सिर्टीको आवेदन फाराम भरिन्छ । भाषा टेस्टको नियम भने कलेज युनिर्सिटी र कोर्सपिच्छे स्कोर (प्राप्तांक) फरक फरक हुन सक्छ । यी सबै कागजातसहित आवेदन दिएपछि कलेज युनिभर्सिटीले या त स्वीकार गर्छ र अफर लेटर (अफर अफ अ प्लेस) पठाउँछ ।
विश्वविद्यालय छनोट, विषय स्पष्टता, विषयको गरिमा, समय अवधि, अस्ट्रेलियामा पढेको कुन कोर्स नेपालका निम्ति पनि काम लाग्छ अथवा त्यो विषयको विश्व बजार (स्कोप) कस्तो छ भन्नेबारे जानकारी लिनैपर्छ । आफ्नो योग्यता, रुचि, चाहनाबारे प्रस्ट हुन जरुरी छ । त्यसनिम्ति परामर्श दातृ निकाय वा अनलाइनबाट जानकारी लिन सकिन्छ ।
अफर लेटर प्राप्त गरेपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकले आर्थिक रूपमा अस्ट्रेलियामा विद्यार्थीले जान, आउन, पढ्न, खाना, बस्न लाग्ने सम्पूर्ण खर्च बेहोर्न सक्ने गरी नेपालको दुईमध्ये कुनै एक बैंक (एसबीआई र नबिल बैंक) मा तीन महिनाअघिदेखि रकम जम्मा रहेको प्रमाण वा रकम नभएको खण्डमा तिनै दुई बैंकबाट शैक्षिक कर्जा लिएको प्रमाण पेस गर्नुपर्छ ।
पढाइ सकेपछि अष्ट्रेलियामा बस्न कुन भिसा लिने ?
अष्ट्रेलियामा अध्ययनरत वा अध्ययनकालागि आउन चाहने धेरै विद्यार्थीहरुले सोध्ने प्रश्न हो–पढाइ सकेपछि अष्ट्रेलियाको अन्य कुनै भिसा लिएर बस्न पाइन्छ कि पाइदैन ? एक्सपर्टहरु भन्छन्–अष्ट्रेलियाको हाल विद्यमान आप्रवासी कानून अनुसार यो सम्भव छ । अर्थात कुनै कुनै अवस्थामा आफ्नो अध्ययन पूरा गरिसकेका विद्यार्थीहरुले केही वर्ष अष्ट्रेलियामै बस्न चाहेमा भिसा आवेदन दिन सक्छन् । यसकालागि अष्ट्रेलियााको अद्यागमन र नागरिकता सम्बन्धी विभागमा गएर परामर्श लिन सकिन्छ । अथवा यहाँँको सरकारको गृह मामिला सम्बन्धी वेवसाइटमा गएर पनि विद्यामान प्रावधानहरुबारे जानकारी लिन सकिन्छ ।
भिसा सम्बन्धी अहिले विद्यमान कानून अनुसार यदि तपाईले कुनै पनि विश्वविद्यालयबाट स्नातक,स्नातकोत्तर तह वा रिसर्चमा कम्तीमा दुई वर्ष अध्ययन गरिसक्नुभएको छ भने बाँकी अध्ययन र कामकालागि भिसा आवेदन दिन योग्य ठहरिनेछ । यस्तो भिसाबाट तपाईले अष्ट्रेलियामा थप दुईदेखि चार वर्षसम्म बस्न र काम गर्न पाउनुहुनेछ । तर यो तपाईको पढाइको विषय र लेभलमाथि निर्भर रहन्छ ।
पृथ्वीलाई फन्को मार्दै अस्ट्रेलियाको धुवाँ, जमिनमा असर कस्तो ?
अस्ट्रेलिया । महिनौँदेखि अस्ट्रेलियाको पूर्वी तटीय क्षेत्रमा डढेलो लागेको छ र त्यसको धुवाँ प्रशान्त […]
दिनेश गुरुङको नेतृत्वमा तमु समाज सिड्नीले पायो नयाँ नेतृत्व,यस्तो छ चुनौति र अवसर
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको सबैभन्दा पुरानो समाजिक संस्था तमु समाज सिड्नीको नयाँ कार्यसमिति दिनेश गुरुङको […]
अष्ट्रेलियामा प्रवासी अभिभावकलाई १० वर्षे भिसा, यस्तो छ अभिभावक भिसाको लागि प्रक्रिया
अष्ट्रेलिया । अष्ट्रेलिया सरकारले प्रवासी अभिभावकहरुलाई १० वर्षे भिसा दिने घोषणा गरेको छ । अध्यागमन मन्त्री […]
अस्ट्रेलियामा नयाँ आर्थिक वर्ष:के-के भयो सरकारी नीति नियममा नयाँ परिवर्तनहरू
अस्ट्रेलिया । अस्ट्रेलियामा नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको छ । १ जुलाई देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै विभिन्न […]